Ahoana no Tokony ny Fivavahana? Ao amin'ny Lamesa. – 2trondro
Home / Fiangonana / Ahoana no Tokony ny Fivavahana? Ao amin'ny Lamesa.
Inona no lazain'ny Baiboly momba ny fanompoam-pivavahana?
Katolika mino fa ny Lamesa, izay ny modelin'ny araka ny Fiaraha-misakafo Farany, no tokony fomba hivavaka.
Ny Fiaraha-misakafo Farany dia Paska izay dia nandray mofo i Jesosy, nisaotra, dia novakiny izany, ary dia nomeny ho ny Apôstôly Roambinifolo, nanao hoe:, "Ity no tenako, izay homena ho anareo; manao izany ho fahatsiarovana Ahy;"Ary avy eo dia ny kapoaky ny divay, nanao hoe:, "Ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako, izay ho aidina ho anareo " (jereo Luke, 22:19-20).1
Satria ny hany fanatitra mendrika ny ho atolotra an'Andriamanitra ao amin'ny Fanekem-pihavanana Vaovao dia i Jesoa mihitsy, dia afaka mandray ny teny avy amin'ny Fiaraha-misakafo Farany ao amin'ny face zava-dehibe, manaiky ny mofo sy ny divay Izay nateriny dia ho tokoa ny Vatany sy ny Rany, ny fanekena ny fitiavany. (Izay no hevitra ny transubstantiation.)
Ny Eokaristia Masina no tena soron'i Jesosy tao Kalvary, izay nohomboana tamin'ny hazo fijaliana. Mazava ho azy, izany akory tsy midika hoe imbetsaka i Jesosy maty isaky ny Mass. Araka ny Saint Paul nanoratra tao amin'ny Taratasy ho an'ny Hebrio 10:10: “Dia maty indray mandeha monja noho ny fahotan'izao tontolo izao, ary tsy misy fanatitra hafa dia ilaina.”
Jesosy’ sorona dia tsy hetsika voafetra ny lasa lavitra. Tsy manana lafiny mandrakizay izany izay supersedes toerana sy ny fotoana, izay no mahatonga ny Baiboly hiantso azy hoe ilay Zanak'ondry voavono "talohan'ny nanorenana izao tontolo izao." (jereo ny Bokin'ny Apokalypsys, 13:8.)
Noho izany, ao amin'ny fankalazana ny Eokaristia, Andriamanitra, izay ivelan'ny toerana sy ny fotoana, mahatonga ny soron'i Jesosy fanomezana ho an'ny fiangonana, dia ny olony, re-manolotra izany ho antsika amin'ny fomba unbloody.
Andriamanitra manao izany mba hanome ny Fiangonana amin'ny fotoana rehetra ny fomba ho anisan'ny mamonjy ny Zanany ny sorona–amin'ny alalan'ny fanomezana izany ho Azy amin'ny sorona fiderana sy fisaorana. Izany no antony Saint Paul nanoratra tao amin'ny Taratasiny voalohany ho an'ny Korintianina 10:16, "Ny kapoaky ny fisaorana izay isaorantsika, moa tsy firaisana amin'ny ran'ny Kristy? Ny mofo izay vakintsika, moa tsy firaisana amin'ny tenan'i Kristy?"Izany no zava-miafina tsy hay ambara fifaliana sy ny Lamesa, izay mandray ny fahafenoan 'ny fitiavan' i Jesoa.
Ny Fiangonana momba ny Eokaristia ho toy ny fanatitra velona dia tsara ara-baiboly, fanatanterahana tahaka izao ny faminanian'i Malakia ny hoavy sorona ho mandrakariva izay natolotry ny hafa firenena, "Fa hatramin'ny fiposahan'ny masoandro ka hatrany amin'ny filentehany, ny anarako lehibe any amin'ny jentilisa; ary na aiza na aiza izy ireo mitondra fanatitra ho an'ny anarako, ary ny fanatitra madio; fa lehibe ny anarako any amin'ny jentilisa, hoy Jehovah, Tompon'ny maro " (Malakia, 1:11).
Ny Fiangonana fandikana ny Malakia dia tohanan'ny Kristianisma ny asa soratra ara-tantara voalohany. Ohatra, The Didache, ny Fiangonana izay boky fampianarana mampiaraka avy amin'ny manodidina ny taona 70 Taorian'i JK, mamaritra ny Eokaristia ho toy ny "fanatitra" nampilazaina ny mpaminany Malakia. Toy izany koa, in ny taona 150 Taorian'i JK, Saint Justin Maritiora miantso ny Malakia "sorona,"" Ny fanatitra atolotra ho Azy eo amin'ny fitoerana rehetra eto amintsika, ny jentilisa, izany hoe ... ny hanina azo amin'ny ny Eokaristia ary toy izany koa ... ny kapoaky ny Eokaristia " (Fifanakalozan-kevitra miaraka amin'ny Trifôna 41).
Ny Fiaraha-misakafo Farany no fanekena vaovao tanteraka ny Paska, dia ny fombafomba lanin'ny sakafo ny Israelita ny andro mialohan 'ny fanafahana tamin'ny fanandevozana tany Ejipta. Nandritra ny Paska dia tsy maintsy ho an'ireo izay te ho voavonjy hanoratanao ny ran'ny sorona zanak'ondry eo amin'ny tolàna sy ny tataom-baravaran'ny an-tranony (prefiguring ny ran'i Jesosy eo ny hazo hataina amin'ny Cross) sy handringanany ny zanak'ondry ny nofo (jereo Fifindra, 12:8). Ny fihinanana ny zanak'ondry ny nofo, ny Israelita Azo lazaina hoe lasa iray miaraka amin'ny zanak'ondry, naka ny spotlessness ho an'ny tenany. Tamin'ny Sakafo farany, izay nitranga ny alina talohan'ny olombelona ny fanafahana amin'ny ota, Jesosy, ny tsy nanota Zanakondrin 'Andriamanitra, Nanolotra ny ny nofo aman-dra ho lanin'ny mahatoky tsakramenta ambanin'ny endriky ny mofo sy ny divay. Amin'ny alalan'ny fanasan'ny ity, dia ho tonga anankiray tamin'ny tanany mahavelona sorona, naka ny sinlessness eo amintsika.
Katolika mino fa misy fivavahana traikefa afa-tsy ny Eokaristia nianjera fohy ny zavatra Andriamanitra Izao-mihitsy efa namboarin'Andriamanitra ho antsika. Ny Tompo dia maniry ny tena akaiky aminay; mba hikambana amintsika vatana sy ny fanahy. Kômonio masina dia manome fomba tena ho an'i Jesosy Kristy mba hanome ny tena manontolo ho antsika sy ho antsika kosa mba hanome ny tenanareo manontolo Aminy: feno, fiaraha-mientana ifampizarana tena manome; tena manokana ny fihaonana amin 'Andriamanitra eo amin' ny maha iray manontolo.
Zavatra tsy mahagaga, salvific zava-nitranga dia ny fo rehetra Mass Katolika.
Noho izany fanokanana ny mofo sy ny divay, Jesosy nahatanteraka ny zavatra 'i Melkizedeka, ny mpisorona ao amin'ny Fanekem-pihavanana Taloha, izay ihany koa nanao fanatitra ho an'Andriamanitra ny mofo sy ny divay (jereo Genesisy, 14:18). Noho izany, tao amin'ny taratasiny ho an'ny Hebreo, St. Paoly hiantso azy hoe "Mpisorona mandrakizay araka ny fanaon'i Melkizedeka" (5:6). ↩